အပင်များအတွက် LED မီးသီး
အလင်းဖြစ်၏ - တစ်ဦးချင်းစီပေါ်၌ပန်းရောင်းများနှင့်ဥယျာဉ်မှူးအပင်ပုံမှန်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုများထဲမှသိတယ်။ အထဲတွင်ကြီးထွားလာကောက်ပဲသီးနှံများမှကြွလာသောအခါဤသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ဖန်လုံအိမ် ကသဘာဝမိုဃ်းလင်းနေတုန်းပဲဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်တဲ့အခါအချိန်အတွက်အိမ်တွင်း, ပျိုးပင်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်, (fitolampy) အတုအလင်းသတင်းရင်းမြစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်စည်းကမ်းအတိုင်း, ဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးစျေးကြီးသည်ကို၎င်း, အလင်းမီးသီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ကြီးထွားလာသီးနှံများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျသညျ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်တခုစက်ရုံအလင်းရောင်နည်းပညာအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်မီးခွက် LED ။
သင့်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးအလင်း output ကိုစက်ရုံ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန် "ချိန်ညှိထားသော" သော fitolampy ကွဲပြားခြားနားသောအနေဖြင့်သာမန်အလင်းမီးသီးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့အဲဒီမီးခွက်အပင်မှဒါလိုအပ်သောအရာပျံ့နေရောင်ခြည်, တူအောင်ဖန်တီး။ LED-type အမျိုးအစားအပင်များအတွက်မီးခွက်ပုံမှန်အတိုင်း fitolampy ကဲ့သို့တူညီသောအလင်းရောင် parameters တွေကိုရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကပါဝါစားသုံးမှုအတွက်အများကြီးပိုပြီးချွေတာရှိပါတယ်။ ဆိတ်ကွယ်ရာမီးခွက်ကနေကြီးထွားလာအပင်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သောတစ်ဦး light-emitting diode ပြားသို့မဟုတ် strips တွေလည်းရှိသောကွောငျ့အလင်းရောင်၏ဤအမျိုးအစားကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအပင်စိုက်ပျိုးကြသည်ရှိရာမျက်နှာကျက်ဖန်လုံအိမ်သို့မဟုတ်အခြားဝုဏ်အတွင်းလိုက်လျောညီထွေအလွန် compactly နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမီးခွက်အဘို့အနိမ့်ဆုံးအိုင်အိုဒင်းအမြင့်ရှိသောအသက် 30 စင်တီမီတာကြောင့်ကြီးထွားလာအပင်ဖဲကြိုးအဘို့ကို LED အလင်းရောင်များအသုံးပြုမှု, multilevel အဆောက်အဦများတည်ဆောက်ခွင့်ပြုထားသည်။ အပင်များနှင့်အကြောင်းရင်းများပိုမိုပိုကောင်းတဲ့အရေအတွက်နဲ့ LED အလင်းရောင်များအသုံးပြုမှု:
နှစ်ခုဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများအတွက်အပင်များအတွက် LED အလင်းရောင် 660 nm (အနီ) နှင့် 460 nm (အပြာ) ဖြစ်ပြီး, ထိုအပင်ကစုပ်ယူကြသည်အလင်း၏လှိုင်းတံပိုးတွေဟာနီးပါးကို 100% ဖြစ်ပါသည်:
သူတို့ကိုယ်သူတို့အလင်း lamps, တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, (အလင်းရောင် circuit ကိုရှညျလြားနှင့်ကိုတိုစေနိုင်ပါသည်) တစ်ဦးမော်ဂျူလာဆက်သွယ်မှုစနစ်အားရှိသည်။
လုံးဝသမားရိုးကျအစားထိုးမရရှိလျှင်ယနေ့စက်ရုံတိုးတက်မှုအတွက်မီးခွက် LED, fitolampy , ထို့နောက်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အိမ်ထောင်စုအတွက်တရားမျှတစွာသူတို့ကိုတွန်းအားပေး။ အလင်းရောင်၏ဤအမျိုးအစား ပို. ပို. အိမ်ပြခန်းများတွင်အသုံးပြုသည်ကိုသူတို့ဿုံပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များအတွက်အတွင်းပိုင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဥယျာဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ အတော်များများကအသုံးပြုမှုကိုပင်တင်းအပေါ်နောက်ထပ်အလင်းအရင်းအမြစ်စီစဉ်ဘို့ချွတ် LED ။ စံမတူဘဲ, အပင်များအတွက် LED မီးအလင်းရောင်တစ်ခုပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားရှိသည်။ ရိုးရှင်းစွာအထား, ထို LED စနစ်ကပိုပြီးရှိအောင်နှစ်သက်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ fitolampy ထက်ကြည့်ရှုပါ။
ကျနော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာကို LED အလင်းရောင်များအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဆိုပါက၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်အလုံအလောက်ထက်ပိုပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါ LED ကိုစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် 60-75% အထိလျှော့ချ fitolamp ။ သိသိသာသာခြုံငုံမီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုဝုဏ်အတွင်းတိုးပွားစေပါသည်။ အပူနစ်မြုပ် mount ရန်မလိုအပ် (ပိုလျှံအပူထုတ်လုပ်သမားရိုးကျမီးခွက်သုံးပြီး) ရှိပါသည်။ မည်သည့် Analogues ထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုမြင့်မား LED အလင်းရောင်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်ပြောင်းလဲမှု၏အကြောင်းတရားများ LED အလင်းရောင်မှသင့်အိမ် fitolamp အလုံအလောက်ထက်ပိုပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားထိုးထံမှတစ်ဦးတည်းသာအကျိုးရှိခြင်းနှင့်ငွေစုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုများအတွက်အယ်လ်အီးဒီကသင်၏အပင်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထူးကုတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မီးသီး LED - ဤနည်းပညာ၏အနာဂတ်ဒီနေ့သင်အသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ!
Dracaena - ခြောက်သွေ့တဲ့အရွက်အကြံပေးချက်များ, မရှိဘူးဖို့ဘာလဲ?
Tagetes - ပျိုးပင်သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းမြေပြင်ကိုစိုက်သောအခါ, မျိုးစပါးကြီးထွားလာ?
မွှေးသောဆေးရွက်ကြီး - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Cacti စောင့်ရှောက် - သင်ကပေါ်၌ပန်းရောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ
Guzman - မျိုးပွား
Melba ပန်းသီးသစ်ပင် - မျိုးစုံ၏ဝိသေသအထူးသဖြင့်ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Peonies "Kansas ပြည်နယ်"
အသက် 10 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကအခန်း
ဇာများအတွက် icing - စာရွက်
မျက်နှာကျက် chandeliers Hi-tech - ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ
Derain အဖြူ "Elegantissima"
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက် - ကြီးထွားလာ
လက်ဖက်ရည်စမုန်ဖြူ - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
ဓာတ်မြေသြဇာ NPK - ကအပင်တွေအပေါ်သက်ရောက်မှုအဖြစ်ဥယျာဉ်အသုံးပြုသနည်း